Manapariaka Ny Bilaogy Aty Afrika Amin’ny Alàlan’ny Onjampeo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2017 5:27 GMT
Mety miahiahy angamba ny mpihaino sasany – “be pitsony loatra ny famahanana bilaogy … aiza ny fahafahana hifandraisana, mbola lafo vidy ny aterineto, ” izany no fanehoan-kevitry ny mpihaino iray – kanefa mampiseho ny fandaharan'ny Onjampeo BBC World Tambajotra Afrika fa zava-misy ary anisan'ny miroborobo ny famahanana bilaogy eto Afrika .
Indreto misy sombiny avy tamin'ny fandaharana – voalohany amin'izany ny fanazavana fohifohy avy amin'i Sokari Ekine izay toniamparitra Afrika Atsimon'i Sahara :
Nahitana ilay bilaogera izay asongadina matetika eto amin'ny Global Voices, Mshairi tao amin'ny trano fandraisam-peo niaraka tamin'ny mpanolotra Bola Mosuro nandritra ny fandefasana mivantana ny fandaharana ny maraina .
Miresaka momba ny fomba tsotra sy maimaim-poana izy hanombohana ny bilaogy aty Afrika ao amin'ny rakipeo faharoa, ilay bilaogera Malawita Mwai Kasamale no teo alohany izay niresaka momba ny bilaoginy hiarahany amin'ny anadahiny, Malawi Is! ary nanomboka tamin'ilay mpaneho hevitra tao amin'ny fandaharana izay voalazako etsy ambony izany.
“Mila fampianarana bebe kokoa isika amin'ny famahanana bilaogy”, izany no fanehoan-kevitra farany tao amin'ity rakipeo fohy ity, izay nalefa tao amin'ny fandaharana tamin'ny alàlan'ny hafatra Somaiso avy any Monrovia any Liberia. Manome fanazavana bebe kokoa sy rohy maromaro mba hanaovana izany fotsiny ny fandaharana.